Drug Fulinta cusub u baahan 10 Minutes in dila gacankudhiigle, US - Rule News
Dhimashada-rigoore (credit Photo: Wikipedia)
November Tani 30, 2009 photo waxay muujinaysaa qolkii dil ah ku “guriga dhimashada” ee Xarunta Koonfurta Ohio Asluubta ee Lucasville, Ohio
gacankudhiigle US A dhibtooday oo gasped for hawada ugu yaraan 10 daqiiqo sidii uu ahaa in la dilaa oofiyo dheer la isticmaalayo is biirsaday muran cusub daroogada, sida ay markhaatiyaal.
Wariye A wargayska joogo Columbus Dispatch ee fulinta 53-sano jir ah Dennis McGuire sheegay in dilaagu Ohio ka dhigay “Bururuftii iyo mergado” codadka sida uu u dhintay.
Saraakiisha Ohio u sheegay AFP in McGuire, dhimashada lagu xukumay in 1989 waayo, kufsi iyo dil haweeney da 'yar oo uur leh, ayaa lagu dhawaaqay dhintay at 10:53 waxaan ahay (1553 GMT).
Saxafiyiinta oo goob joog fulinta ayaa sheegay in dawooyinka loo isticmaalo in la duray halis ah ay bilaabeen in la maamulo 24 daqiiqo hore ee xabsiga ku Lucasville.
Under a maamuuska cusub Ohio, McGuire waxaa la dilay iyadoo la isticmaalayo is biirsaday oo ka kooban midazolam ku dejinaysaa iyo hydromorphone xanuunka, isku-dar ah marna horay loo isticmaalo ee dalka Mareykanka.
The maamuuska cusub oo dil ka dib markii la soo bandhigay Ohio iyo gobolada kale ee Maraykanka in hayn ciqaabta dilka bilaabay qulqulaya ka barbiturates markii saarayaasha Yurub joojiyay iyaga qeybinayay.
Qareenada McGuire ayaa ka soo horjeeda habka of dil, oo wuxuu ku yidhi dilaaga dhiman doono qabatin ku ugub ah oo loo yaqaan “gaajo hawada,” hayso sort of ciqaab naxariis lahayn oo aan caadi ahayn ka mamnuuc hoos yimaadda Dastuurka Mareykanka.
Laakiin rafcaan, oo waxay tageen xagga jidka oo dhan si ay Maxkamadda Sare ee Mareykanka, loo diiday.
Garsoore federaalka ee Ohio, Gregory Frost, sheegay “caddaynta maxkamadda ka hor ku guuldareysatay inay khatar la taaban karo in McGuire la kulmi doonaan xanuun aad u daran.”
Saxafiyiinta oo goob joog Thursday ee fulinta ayaa sheegay in McGuire u muuqatay in suffocating sidii uu ahaa in la dilaa.
Sida laga soo xigtay balliga suxufiyiinta, waxa uu ahaa dil ugu dheer tan iyo Ohio dib-u-soo bandhigay ciqaabta dilka ah ee 1999.
“Ugu ku saabsan 10:33 waxaan ahay, McGuire bilaabay dhibtoonaya oo taahaysa qaylo hawo, samaynta bururufta iyo mergado dhawaaqa in socday ugu yaraan 10 daqiiqo, isagoo heaving xabadka iyo gacmaha feedh,” Columbus Dispatch ku sheegay.
“Deep, dhawaaqyada qablamaya lidiga afkiisa ka. Waayo, dhowr daqiiqado ee la soo dhaafay ka hor inta uu dhintay, wuxuu weli joogay.”
khubaro rigoore Dhimashada ka hadlay sida walaac at faahfaahinta dhimasho McGuire ee, isagoo sheegay inay tilmaamay in hab ka mid ah dil taas oo ahayd “u fool xun oo dhibaato.”
“In light of dhererka iyo abbaarta sharaxaada ee fulinta Dennis McGuire ee, marka lagu daro kala duwan ee dhibaatooyinka duro halis sheegay in dalalka kale, waxa ay u muuqataa in hab cirbad halis ah wadankan waa dheeraad ah u fool xun oo dhibaato badan ay abid ayaa,” Deborah Denno, ka University School Fordham ee Law, u sheegay AFP in email ah.
Maya FOA, agaasimaha kooxda dhimasho rigoore ee group aan faa'iido-ka Reprieve, Maamulka eedeeyay Ohio ee iska indha-tiray talo khabiir.
“Ohio waxaa u digay isaga by keentay khubaro in tijaabinayaan on dadka sidan riski iyaga sababay dhibaato halis ah, iyo caddaynta muujinaysa in ay taasi uu ka dhashay,” FOA ku sheegay hadal uu.
“Sidee badan oo dil dadejiyaan la sameeyo waxaan u baahan nahay si ay u arkaan ka hor Dilaayaasha joojiso isticmaalka dadka sida doofaarka Guinea?”
Thursday ee dilka ahaa kii labaad ee sanadkan soo baxay mas'uuliyiinta US isticmaalaya waxyaabaha cusub oo u muuqday in ay ku keento dhibaato ah u xukumay.
On January 9 ee Oklahoma, dilaaga cambaareeyay Michael Lee Wilson ayaa sheegay in uu dareemi laga yaabaa inuu “gubashadii jidhkaaga oo dhan” sidii uu ahaa in la dilaa.
Wilson waxaa la dilay iyadoo la isticmaalayo isku dhaf ah oo ay ku jiraan daroogada pentobarbital, walax si caadi ah loo isticmaalo in lagu euthanize xoolaha.
Si kastaba ha ahaatee, noocyada kala duwan ee daroogada ayaa hadda kaliya soo saaray farmasiyada la maamulaa sharciyada maxalliga ah, halkii nidaamiyo federaalka.
Fadeexadii A qarxay November 2012 ee Massachusetts markii nadaafad xumo ka mid ah farmasiiyada, kuwaas oo ahaa eedeeyay sida Jidka a meningitis dillaacay dilaaga ah.
McGuire waa nin saddexaad la dili oo dalka Mareykanka ah sanadkan. Ohio ku toogtay saddex ruux oo ka mid ah 39 dadka in la dilaa ee dalka Mareykanka sannadkii hore, sida ay ciqaabta dilka Xarunta Macluumaadka.
article Tani, daroogada dilka New qaadataa 10 daqiiqo in la dilo gacankudhiiglaha US, waxaa syndicated ka AFP oo waxaa halkan fasax posted. Copyright 2014 AFP. All Rights Reserved
63255	8 United States
← 10 Talooyin Simple si ay u kordhiso Your Urursanaanta Sigaarka ka khatar badan tahay Ever, Warbixinta US digay →